कसरी ह्वात्तै घट्यो फेवातालको पानी? – Namaste Host
February 7, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on कसरी ह्वात्तै घट्यो फेवातालको पानी?
लमजुङबाट शुक्रबार पोखरा आएका दीपेन्द्र श्रेष्ठ शनिबार फेवाताल किनार बाराहीघाट पुगे। साँझपख उनी पुग्दा तालको पानी ह्वात्तै घटेको थियो। कामना विकास बैंकको स्टाफ मिटिङका लागि पोखरा आएका श्रेष्ठ र उनका साथीहरूले तालको पानी भने छुनै नसकिने गरी पर पुगिसकेको थियो।
‘तालको पानी त ह्वात्तै सुकेछ’, उनले भने, ‘कति छिटो फेवातालको पानी घटेछ।’
तालमा पानीको सतह घटेर बाराही मन्दिर नजिक पुगेको छ। तालको पानी प्राकृतिक रूपमा सुकेर घटेको भने होइन। दीपेन्द्रलाई थाहा थिएन कि तालमा पानी जम्मा गर्न बाँधिएको बाँधका ४ वटै ढोका खोलेर पानी बगाइएको छ।
शुक्रबार दिउँसो बाँधको ढोका खोलेपछि साँझसम्म धेरै पानी बगेर गइसकेको छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कास्कीका प्रमुख किरण आचार्यका अनुसार फेवातालको पानी १ मिटरभन्दा बढी घटिसकेको छ। तालको पानी १ मिटर मात्र घट्दा पनि पानीले ओगटेका ठूलो भू-भाग जमिनमा परिणत भएको छ।
शुक्रबार र शनिबार जस्ता बिदाको समय पारेर धेरै नेपाली घुम्न निस्कन्छन्। नेपाली होस् या विदेशी नेपाल घुम्न निस्कँदा धेरैजसोको पहिलो रोजाइ पोखरा हो।
शनिबार पोखरा घुम्न आएका पर्यटकले पनि तालको पानी घटेको देखेर चकित बने।जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका अनुसार तालको पानी खोलामा बगाइनुका कारण भने बाँधको मर्मत सम्भार हो।
‘३५ सालदेखि बाँधको मर्मत भएको थिएन’, कार्यालय प्रमुख आचार्यले भने, ‘बाँधको मर्मत र फेवातालबाट सिँचाइका लागि लगिएको कुलो मर्मतका लागि तालको पानी सुकाइएको हो।’
अहिले १ मिटरमात्र पानी घटाएर मर्मतका लागि प्रयास गरिने र नभए २ मिटरसम्म पानी घटाउनुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए।
बाँध र नहर मर्मतका लागि सरकारले २ करोड बजेट छुट्याएको छ। जसमा १ करोड रुपैयाँ नहर मर्मत र १ करोड रुपैयाँ तालको बाँध मर्मतमा खर्च हुने आचार्यले जानकारी दिए।
मर्मत सम्भार गर्न आइतबार पनि पानी घटाउनुपर्ने र २ महिनाभित्र मर्मत सम्भार सकिने उनले बताए।
फेवातालमा सबभन्दा पहिलो विक्रम संवत २०१८ सालमा पहिलो पटक बाँध बाँधिएको थियो। भारतीय सहयोग मिसनको १५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा ४६ फिट अग्लो बाँध बाँधिएको थियो।
२९४ मिटर लामो उक्त बाँधका ११ वटा ढोका थिए। उक्त बाँध बाँधेर फेवातालको पानी १५ हजार रोपनी जमिन सिँचाइका लागि लगिएको थियो। त्यही नहरको पानीबाट १ मेगावाटको बिजुली निकालिएको थियो।
पहिलो पटक बनेको यो बाँध धेरै लामो समय टिकेन। २०३१ सालमा यो बाँध फुट्यो। तालको पानी आधाभन्दा बढी बहेर गयो। बाँध फुट्दा फेवातालबीचमा रहेको बाराही मन्दिर हिँडेरै जान सकिने अवस्था आएको थियो। भारतीय सहयोगमा बनेको उक्त बाँध फुटेपछि संयुक्त राष्ट्र संघको सहायतामा २०३४ सालमा अर्को बाँध बन्यो।
पुरानो बाँध भन्दा केही तल बनाइएको यो बाँध भने अहिलेसम्म टिकेको छ।